हो कनक र कनक जस्तालाई थुन्नैपर्छ – NepalAustralianews.com
हो कनक र कनक जस्तालाई थुन्नैपर्छ
April 30, 2016 विचार
लेखक: मदन लम्साल
३० अप्रिल २०१६, काठमाण्डौ- गतहप्ता अख्तियारले पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई पक्रेर झ्यालखाना पुर्‍यायो । अरु भीआईपी जस्तै कनक पनि जेल जानुपर्ने भएपछि स्वतः बिरामी परे र अस्पताल पुगेका छन् । भनौ प्रहरीको पहराका साथ अस्पतालरुपि जेल पुर्‍याइएका छन्, पुर्‍याउनै पर्थ्यो । कनकलाई थुन्नैपर्ने यस्ता कारण देखिन्छन् ।
एक त कनकले साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतले देशमा सफल रुपमा चलिरहेको यातायात सिण्डिकेट प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा त्यस विरूद्ध काम गरे । कुनै जमानामा एक सफल र नमूना सेवाको परिचय बनाएको साझा बस सेवालाई नेपालका राजनेताले ‘सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन’ भनेर ध्वस्त बनाएर सिण्डिकेटलाई स्वस्थ्य बनाउँदै लगेका थिए । तर, पत्रकार हुँदै साझाको अध्यक्ष के बन्या’ थे यी कनकजीले फेरी साझा बसलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन पो थालेछन् बा । बसमा सुविधा थप्दै जाने, बाल, महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री बनाउँदै लाने गर्न थालेछन् । अझ साझालाई नाफामा लाने सुर पो गरेका रहेछन् । यस्तो नचाहिने काम गरी हिँड्नेलाई थुन्नुपर्दैन त ? मान्छेले कति वर्षमा पैसा कमाउन सकेका छैनन् । दीक्षित साझाका अध्यक्ष के बन्या थे, त्यसको ४/५ वर्षमै त्यत्रो पैसा कमाउन भ्याएछन् । उनले साझाबाटै कमाएक हुनाले अख्तियारले उनलाई ठिगुर्‍याएको होला नि ।
अख्तियारका अनुसार विदेशमा आईएनजीओबाट पैसा लिएर विदेशतिरै राखेको छन् रे । साँच्चै हो भने यो त सोह्रै आना गलत भयो । त्यो पैसा त नेपाल नै ल्याएर यहाँ धर्म परिवर्तन आदि गराउने काममा पो खर्च गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेर पनि कनकले नराम्रै गरेका पक्कै हुन् ।अर्काे कुरा, कनकले अख्तियारजस्तो पावरफुल संस्थालाई अटेर गर्ने ? बयान लिन बोलाउँदा पनि नजाने ? यसरी च्यालेञ्ज गरेपछि देखाउन परेन त अख्तियारले पावर ? देशको सांसद्लाई त थर्काउन सक्ने अख्तियारलाई नै नटेर्ने ?
यो त अति भयो । अनि थुन्नुपरेन त कनकलाई ?
पत्रकार भएर खुरूक्क पत्रकारिता गरेर बस्नुपर्ने, अख्तियारले जारी गरेका प्रेस विज्ञप्ति मात्र छापेर बस्नुपर्नेमा अख्तियार प्रमुखकै खोट देखाइहिँड्ने ? लोकमान सिंह जस्तो लोकप्रिय छवि भएका व्यक्तिका विरूद्ध बोल्दै हिँड्ने ?
जगजाहेर छ कि लोकमान भनेका अरुजस्तो संसदीय सुनुवाइ गरी गरी जागीर खान गएका मान्छे होइनन् । उनी त सबै दलका एकमात्र उम्मेदवार भएर ठाडै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । अहिले मात्र होइन राजाकै पालादेखि उनी एकमात्र र निर्विकल्प व्यक्तिका रुपमा रहेका छन् । उनी एकैचोटी सरकारी उच्च ओहोदामा नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन् । अझ उनी भूपालमान सिंह कार्कीका छोरा पनि हुन् भन्ने कनकलाई थाहा छैन जस्तो छ । भूपाल भनेका पञ्चायतकालमै पनि आफ्नो शालिक आफै बनाएर शहरमा ठड्याउन सक्ने व्यक्ति हुन् । यो भिन्दै कुरा हो कि उनको शालिक तथाकथित जनआन्दोलनले ढलाइदिएको थियो । उनी प्रमुख भएर आएपछि देश कति धेरै भ्रष्टाचारमुक्त भइसक्यो हामी सबैले देखेकै छौं । यत्रो योगदान गरिरहेका व्यक्तिविरूद्ध बोल्दै हिँड्ने ? यस्ता लोकप्रिय, क्षमतावान् व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने संस्थाविरूद्ध बाझ्दै हिँड्ने ?
आयल करप्शन निगमका कार्यकारी प्रमुख जस्तो पावरफुल श्री गोपाल खड्काजस्ता व्यक्ति त अख्तियारले भन्नेबित्तिकै तुरून्त हाजिर हुन्छन् । र, तुरून्त छुट्छन् पनि । किनकि, कार्की यति दयालु छन् कि उनी कुनै पनि ठूलाठालुलाई यसो बोलाएको जस्तो गरे पनि कारबाहीचाहिँ गरिहाल्दैनन् । तर, अटेरै गर्ने कनकलाई कारबाही गर्न परेन त ?
सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरो के छ भने कनकले सम्पत्ति विदेशमै राखेको कुराचाहिँ अख्तियारले कसरी चाल पाएछ हँ ? यसमा ठूलै रहस्य हुनुपर्छ ।
एक–दुइटा नबुझिने अरु कुरा के छ भने त्यत्तिका सम्पत्तिका मालिक कनकलाई जाबो साझा बसबाटै पैसा कमाउनुपर्ने दरकारचाहिँ के परेछ कुन्नि ? कि अख्तियारले उनको पैतृक सम्पत्तिलाई साझाबाट कमाएको भन्ठानेर पो झुक्किएछन् कि ?
अर्को कुरा, आफूले नेपालबाट पैसा विदेश लगेर लगानी गरेको कुरा खुलमखुल्ला किताबै लेखेर बयान दिनेहरू यहीँ छन् । अन्य थुप्रै नेपालीले विदेश पैसा पुर्याएर अपार्टमेण्ट किनेको, विदेशी बैङ्कमा पैसा लुकाएर राखेको तथ्य पनि नेपालमा ‘ओपन सिक्रेट’ भए पनि अख्तियारले थाहै पाउँदैन । तर दीक्षितको सबै कुराचाहिँ साच्चै थाहा पाएकै हो अख्तियारले । मान्नैपर्छ अख्तियारलाई ।
वैद्य माओवादी फुटको संघारमा
तीन टुहुरा वालवालिकालाई चिल्ड्रेन पिस होम- दाङले दियो साहारा